Wiil uu dhaley madaxweynihii hore ee Somalia oo guluf siyaasadeed wada (Sawiro) – SBC
Wiil uu dhaley madaxweynihii hore ee Somalia oo guluf siyaasadeed wada (Sawiro)
Posted by editor on Juun 3, 2011 Comments
Wiil uu dhalay mid ka mid ah madaxweyneyaashii soo marey Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya wuxuu ka bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoogan oo ku doonayo in uu mar kale kaga soo muuqdo masraxa siyaasada Soomaaliya.
Maslax Maxamed Siyaad oo uu dhaley madaxweynihii hore ee Soomaaliye Jeneral Maxamed Siyaad Barre ayaa magaalada Nairobi kulan uu ku qabtey wuxuu ku soo bandhigay xisbi siyaasi ah oo ka qayb qaadan doona arimaha siyaasada Soomaaliya.
Munaasabad ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa xariga looga jarey xafiis uu magaalada Nairobi ka furanayo xisbigaasi oo lagu magacaabo xisbiga Democratic Party of Somalia ee loo soo Gaabiyo DPS waxaana laga furey xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ee magaalada Nairobi, waxaana xafladaasi goob joog ka ahaa ama ka dhexmuuqdey masuuliyiinta xisbigaasi oo ay ka midyihiin Gudoomiyaha Maslax Maxamed Siyaad & General Maxamed Siciid Xirsi (Morgan).
Ugu Horayn waxaa munaasibada furay Gudoomiyaha Dhalinyarada Xisbigaasi oo qayb wayn ka ah Horu socodka Xisbigaasi Cumar Abokar Cumar oo sheegay inay ku Faraxsanyihiin ka soo qayb Galka Madaxdaasi ee xafladooda ay dhalinyarada Ururakaasi ku Furanayaa Xafiis Cusub
Sidoo kale waxa uu Gudoomiyihu ka hadlay sida dhalinyarada Somaliyeed ay ugu Heelan yihiin inay Ilaawaan dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya hadheeyay iyo waliba qabyaalada isaga oo kula dardaarmay inay Gacanaha is qabsadaan isla markaana ay ku soo biiraan Xisbiga.
Gudoomiyaha xisbiga DPS Maslax Maxamed Siyaad Barre oo goobtaasi hadal ka jeediyey ayaa ugu horeyn wuxuu qeexay Isbedelada aduunka hareeyay ay horseed ka yihiin dhalinyaro mawaadiniin ah isla markaana kuwa Soomaaliya looga fadhiyo inay qayb ka noqdaan arimahaasi Isbedelada dunida ka socda.
Maslax wuxuu amaanay dadaalka dhalinyarada xisbigaasi ay ugu jiraan inay Kor u qaadaan himilooyinkooda.
Gunaanadkii kulankaasi ayaa Gudoomiyaha qaybta dhalinyarada eeuUrurka DPS Kaga dhawaaqay halkaasi xubno hablo iyo wiilal ah oo ka mid noqonaya ururkaasi.
Sawir Qaade: Jaamac Ayaanle Fayte
Warbixinta: Suleymaan Faaris